Naturopathic Physicians Job Description / တာဝန်ယူမှု Template ပြီးတော့လုပ်ငန်းများ – JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized / Naturopathic Physicians Job Description / တာဝန်ယူမှု Template ပြီးတော့လုပ်ငန်းများ
Naturopathic Physicians Job Description / တာဝန်ယူမှု Template ပြီးတော့လုပ်ငန်းများ
စူပါအဒ်မင် ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized2မှတ်ချက်များ 353 views
ခွဲခြားသတ်မှတ်, ကိုင်တွယ်, and assist in preventing diseases utilizingamethod of exercise that is in line with the pure healing capability of an individual. May use physical, mental or physical approaches. May also utilize pure treatments, star or prescription medication, အစားအစာများ, ဟင်းသီးဟင်းရွက်, or additional natural remedies.
Order analytical imaging procedures such as for example radiographs (x ကရောင်ခြည်), ultrasounds, mammograms, and bone densitometry assessments, or send people to different health professionals regarding these procedures.
For example homeopathy or therapies, give treatments Asian or Ayurvedic remedies, diathermy and electrotherapy , employing real agents including air, warm, ရှိအေးမြသော, water or ultraviolet lighting to catalyze the human body to treat itself.
ပေး, ဖြန့်ဝေ, or recommend organic medications including dietary supplements, ဟင်းသီးဟင်းရွက်, foods or botanical ingredients , vitamins, nutraceuticals , and amino-acids.
စံချိန်ကလူ’ histories, including identifying information, main complaints, ဝေဒနာတွေက, prior healthcare or family histories, or characteristics.
Active-Listening-To what other-people are saying offering entire attention,, created ခံရအချက်တွေကိုနားမလည်ဖို့အချိန်နဲ့စွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုပြီး, မှန်ကန်သောအဖြစ်မေးခွန်းတွေမေး, နှင့်မလျော်ကန်သောအချိန်များတွင်လမ်းပြနေဘယ်တော့မှ.
Monitoring-CheckingOREvaluating performance of yourself, အခြားအဖြစ်ကြောင်းကိုတစ်ဦးချင်းစီ, or corporations consider remedial actions or to make advancements.
အခြားသူများနှင့် ပတ်သက်. control-ပြောင်းခြင်းလုပ်ရပ်များ’ လှုပ်ရှားမှုများ.
installation-Installing packages များ, ထုတ်ကုန်, ဝါယာကြိုး, or tools to meet up specifications.
ထုတ်ကုန်အပေါ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်အခါဆုံးဖြတ်ခြင်းကြောင်းကို Maintenance-ကွပ်မျက် upkeep.
Quality-Control Research-Completing checks and examinations of goods, ကုမ္ပဏီများမှ, ထိရောက်မှုသို့မဟုတ်အရည်အသွေးကိုစစ်ကြောစီရင်တော်မူရန်သို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို.
Systems Analysis-Identifying what sort of technique should perform and how adjustments in operations, ဝေဒနာတွေက, အဆိုပါ setting ကိုနှင့်အတူရလဒ်များ impact နိုင်ပါတယ်.
Time-Management-Handling the own period as well as others’ တဦးတည်း၏တခဏ.
Supervision of Money-Identifying how dollars is likely to be spent to acquire the task accomplished, ဤဥပဒေကြမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်းရောင်းအား.
Supervision of Materials Sources-Experiencing and getting to the ideal use of tools, ထူထောင်မှု, နှင့်ပစ္စည်းများသီးခြား function ကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့.
Supervision of Personnel Resources-Developing stimulating, သူတို့လုပ်ဆောင်အဖြစ်ရှေးရှေးလမ်းညွှန်, determining the very best individuals for that task.
ကြိုးစားအားထုတ်မှု – %
အခြားသူများနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန် – %
ယဉ်ကျေးမှုအရှေ့တိုင်းဆန် – %
ဖိအား Threshold – %
မှီခို – %
ရှုထောင့်များ၏အသိအမြင် – %
တိုးတက်ခြင်း – %
စဉ်းစား – %